चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको स्वागतमा लागि सिंगारियाे काठमाडौं, के–के छन् त नेपालका एजेण्डा ?::Nepal Online News Portal
चिनियाँ राष्ट्रपति जिनपिङको स्वागतमा लागि सिंगारियाे काठमाडौं, के–के छन् त नेपालका एजेण्डा ?
प्रकाशित मिति : बिहिबार, अशोज २३, २०७६
काठमाडाैंः चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वागतका लागि काठमाडौंलाई चिटिक्क पारिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सी बस्ने होटलसम्म सडक कालोपत्रे गरिएको छ, सडक पेटीहरु रंगाइएको छ । सडक छेउमा फूल तथा बिरुवा रोपिएको छ ।
सडकको दुई छेउमा रहेका बिजुलीका पोलहरुमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सीको फोटो झुण्ड्याइएको छ । ठाउँ-ठाउँमा स्वागतद्वार बनाइएको छ ।
राष्ट्रपतिको तहमा चीनबाट २३ वर्षपछि हुन लागेको भ्रमणलाई स्मरणीय बनाउने सरकारको तयारी छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका क्रममा नेपालले रेल, सुरुङ र ट्रान्समिसन लाइनलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने भएको छ ।
के–के छन् त एजेण्डा ?
त्यसैगरी जलविद्यतुमा चिनियाँ लगानीसँगै क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन पनि नेपालको एजेण्डा सूचीमा छ ।
उच्च क्षमताको गल्छी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन दुई देशका अधिकारीहरु लामो समयदेखि छलफलमा थिए । सीको भ्रमणका क्रममा यसको लगानी जुटाउने, डीपीआर गर्ने र जीटूजी (गभर्नमेन्ट–टू गभर्नमेन्ट) मोडलमा निर्माणको प्रस्ताव गर्ने नेपालको तयारी छ ।
‘यो भ्रमणलाई नेपाल सरकार र नेपाली जनताले भव्यतापूर्वक सफल र परिणाममुखी बनाउने आशा र विश्वास गरेका छन् ।’ सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने ।